KULMIYE Party » Chairman Chairman – KULMIYE Party
Muj. Muuse Biixi Cabdi waa siyaasi reer Soomaalilaan ah. Muuse Biixi wuxuu ku dhashay Hargeysa sannadkii 1948-dii. Wuxuu waxbarashadiisii hoose iyo sare ku soo qaatay magaalooyinka Hargeysa iyo Camuud. Intaas kaddib wuxuu waxbarasho dibadeed u tagay Midawgii Soofiyeeti ee Ruushku hoggaaminayay isagoo ka qalin jabiyay Akaddamiyaddii Djembe oo uu ku soo bartay hagidda diyaaradaha dagaalka. Sidoo kale, Muj. Muuse Biixi wuxuu waxbarasho u tagay carriga Maraykanka isagoo wax ka bartay Akaddamiyaddii Fort Lee ee Washington. Sannadkii 2010-kii Muuse Biixi wuxuu shahaadada heerka labaad ee xalinta khilaafaadka ka qaatay Jaamacadda Hargeysa.
Sannadkii 2010-kii Muuse Biixi Cabdi waxa loo doortay guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye. Sannadkii 2015-tii waxa loo doortay murrashaxa doorashada xisbiga Kulmiye ku meteli doona doorashooyinka 2017-ka. Muuse Biixi waa nin aad u yaqaanna dadka Soomaalilaan iyo guud ahaan deegaannadooda waana nin waayo aragnimo dheeraad ah u leh hannaanka uu u dhisan yahay waddanku. Waxa lagu tiriyaa dadka dhifta ah ee taariikhda Soomaalilaan si weyn ugu dhuun daloola.